elu spout ụlọ ịwụ ahụ foset nwa
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ / WOWOW Bathroom Foset Na Swivel Spout Black
Igwe anaghị agba nchara dị mma, wowowfaucet Matte Black Kitchen Faucet Single Handle na ezigbo mma ma chekwaa ego, nnyefe ọsọ ọsọ, akwụkwọ ikike afọ atọ!
Ntụziaka nwụnye 2320200B
E jiri ya tụnyere ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ ọdịnala, ọkpọka ọkpọka 2320201B nwere ikike nke ịdọpụta, nke nwere ike ịmịpụ 40-60 cm n'ogologo, nke na-eme ka ebe ahụ na-agba agba, dị ka nkuku ndị na-enweghị ike ịsacha site na nsị ma nwee ike bụrụ onye a na-asacha mfe; Ọ dị mfe ịdọrọ na ịsacha ntutu gị.
Ojiji zuru ụwa ọnụ: mmiri mmiri maka ebe ịsa ahụ ma ọ bụ efere, enwere ike itinye ya maka ụlọ ịsa ahụ na kichin, arc dị elu yana ntụgharị ogo ogo 360 dabara adaba maka ebe ịsa ahụ na-eji ma ọ bụrụ na ị na-eme ọtụtụ ọrụ.
Ọdịmma dị elu nke azụmaahịa azụmahịa nke oge a: njedebe ojii, nke pụrụ iche na nke na-adịghị agafe agafe, nwere ike iguzogide ịkwa ụbọchị na nchara, igwe anaghị agba nchara na zinc metal ahụ, ihe siri ike ma dịgide, zuru oke maka ụlọ, ebe ịsa ahụ, kichin, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ oriri, ụlọ, ụlọ mgbazinye na wdg.
Ngwa dị mma: ọwa mmiri nke tucan na usoro ihe omimi America site na ederede nchekwa, valvụ na-enweghị mmiri, na ụdị mkpuchi ime ụlọ na-enweghị nchebe iji hụ na ụkpụrụ mmiri dị mma, ihe nrụnye niile dị na igwe anaghị agba nchara.
SKU: 2320201B Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ Tags: Akwa Arc, matte Black, Naanị aka
12.17 x 8.54 x 2.95 sentimita
6.3 sentimita asatọ
N'aka ekpe na aka nri
Ulo oru / ebe obibi